FAQ - mpanamboatra TC
Eny, takianay ny baiko iraisam-pirenena rehetra mba hanana habetsaky ny filaminana ambany indrindra. Raha mitady hamidy indray ianao nefa amin'ny habetsaky ny kely dia kely, mamporisika anao izahay hijery ny tranokalanay
Ny vidin'ny fandefasana dia miankina amin'ny fomba safidinao hahazoana ny entana. Express matetika amin'ny fomba haingana indrindra fa koa lafo indrindra. Amin'ny alàlan'ny fitsangantsanganana an-dranomasina no vahaolana tsara indrindra ho an'ny vola be. Ny saran'ny entana mivezivezy azontsika omena anao fotsiny raha fantatsika ny antsipirian'ny habetsahan'ny lanjany, ny lanjany ary ny fomba. Azafady mba mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.